Fiadanan’ny Tena Manokana: Valisoa avy amin’ny Fahamarinana - Quentin L. Cook
Fiadanan’ny Tena Manokana: Valisoa avy amin’ny Fahamarinana
Na dia eo aza ny fitsapana eo amin’ny fiainana, dia hovaliana soa amin’ny fiadanan’ny tena manokana ny fiainana amim-pahamarinana noho ny Sorompanavotana sy ny fahasoavan’ny Mpamonjy.
Nahatonga ahy hisaintsaina momba ny fotopampianarana mikasika ny fiadanana ary indrindra fa ny anjara asan’i Jesoa Kristy amin’ny fanampiana ny tsirairay amintsika hahazo fiadanana maharitra ho an’ny tena manokana ny zavatra niainako vao haingana.
Nampihetsi-po ahy lalina ny zava-niseho roa tao anatin’ireo volana vitsy lasa izay. Voalohany dia nandray fitenenana tamin’ny fandevenana an’i Emilie Parker aho, zaza sarobidy enin-taona izy, izay maty niaraka tamin’ny olona 25 hafa nahitana ankizy kely 19, nandritra ny fitifirana mampivarahontsana tao Newtown ao Connecticut. Nitomany niaraka tamin’ny fianakaviany aho ary nahafantatra fa maro ireo tsy nanana fiadanana. Nahita aho fa nahery sy nanam-pinoana ireo ray aman-dreniny, dia i Robert sy i Alissa Parker.
Faharoa dia nihaona tamin’ny mpikamban’ny Fiangonana mahatoky an’arivony tao Côte d’Ivoire ao Abidjan aho.1 Nianjadian’ny fahasarotana ara-toekarena, fanonganam-panjakana nataon’ny miaramila, ary ady an-trano roa vao haingana izay nifarana tamin’ny 2011 ity firenena ao Afrika Andrefana miteny Frantsay ity. Na izany aza dia nahatsapa fiadanana miavaka aho rehefa niaraka tamin’izy ireo.
Matetika ireo zava-miseho mitranga no manaisotra ny fiadanana ao amintsika ary mahatonga antsika hahatsapa ho osa.
Iza no afaka hanadino ny fanafihana mahatsiravina natao tamin’ireo toerana samihafa teto Etazonia tamin’ny 11 Septambra 2001? Ny zava-miseho toy izany dia mampahatsiahy antsika hoe afaka ny ho rava haingana tokoa ny fahatsapantsika fiadanana sy fiarovana amin’ny loza.
Ny zanakay lahimatoa sy ny vadiny, izay niandry ny zanany voalohany, dia nipetraka tao anatin’ireo vondron-trano fahatelo niala avy teo amin’ny World Trade Center ao New York City rehefa nianjera tao anatin’ny Tour du Nord ny fiaramanidina voalohany. Nandeha tany amin’ny tafon’ny trano fonenany izy ireo ary nihorohoro rehefa nijery ny zavatra noheverin’izy ireo fa karazana loza tsy nampoizina mahatsiravina. Avy eo dia hitan’izy ireo ny fiaramanidina faharoa nianjera tao anatin’ny Tour du Sud. Fantatr’izy ireo avy hatrany fa tsy loza tsy nampoizina izany ary nino izy ireo fa notafihina ny ampahany atsimon’i Manhattan. Rehefa nirodana ny Tour du Sud dia voasaron’ny rahom-bovoka izay nirotsaka manerana an’i Manhattan atsimo ny trano lehibe nisy ny trano fonenan’izy ireo.
Noho izy ireo nikorontan-tsaina momba ny zavatra hitany sy niahiahy ny hisian’ny fanafihana hafa dia nandeha tany amin’ny faritra nisy filaminana kokoa izy ireo ary avy eo dia tany amin’ny trano Fiangonan’ny tsatòka ao Manhattan ao Lincoln Center. Rehefa tonga tao izy ireo dia nahita fa mpikambana am-polony tao Manhattan atsimo no nandray fanapahan-kevitra mitovy amin’ny azy ireo mba hivondrona ao amin’ny foiben’ny tsatòka. Niantso izy ireo mba hampahafantarana anay hoe taiza no nisy azy ireo. Nahatsiaro ho maivamaivana aho fa nieren-doza izy ireo kanefa tsy nahagaga ahy ny toerana nisy azy ireo. Mampianatra ny fanambarana maoderina fa ny tsatòkan’i Ziona dia toerana fiarovana sy “fialofana amin’ ny tafio-drivotra sy amin’ ny fisafoahana, rehefa haidina tsy misy fangarony amin’ ny tany manontolo izany.”2
Tsy afaka niverina tao amin’ny trano fonenany izy ireo nandritra ny herinandro mahery ary ketraka noho ny nahafatesan’ny olona tsy nanan-tsiny, saingy tsy nianjadian’ny fahavoazana maharitra izy ireo.
Nisy fiantraikany lalina tamiko ny fahasamihafan’ny fotopampianarana teo amin’ny fiadanana araka izao tontolo izao sy fiadanan’ny tena manokana rehefa nandinika ireo zava-niseho ireo aho.3
Tamin’ny nahaterahan’ny Mpamonjy dia nisy anjely maro be nidera an’Andriamanitra ary nilaza hoe “Voninahitra any amin’ny avo indrindra ho an’Andriamanitra! Ary fiadanana ho ety ambonin’ny tany amin’ny olona ankasitrahany.”4
Kanefa dia tsikaritra hoe nampalahelo, fa na dia nandritra io fotoana manan-danja mandrakizay taorian’ny nahaterahan’ny Zanakalahin’Andriamanitra io aza, dia nanatanteraka famonoan-jaza tsy nanan-tsiny tao Betlehema i Heroda Mpanjaka.5
Ilaina amin’ny drafitry ny fahasambarana ny fahafahana misafidy. Mamela ny fitiavana, ny fahafoizana, ny fivoaran’ny tena manokana, ary ny traikefa ilaina amin’ny fivoarantsika mandrakizay hitranga izany. Mamela koa ny fanaintainana sy ny fijaliana rehetra iainantsika mandritra ny fiainana an-tany hitranga io fahafahana misafidy io, eny fa na dia rehefa vokatry ny zavatra tsy takatsika sy ny safidy ratsy manimba ataon’ny hafa aza. Ilay Ady tany An-danitra dia natao mba hiarovana ny fahafahantsika misafidy ny tsara sy ny ratsy ary ilaina amin’ny fahatakarana ny asa fanompoan’ny Mpamonjy tety an-tany.
Araka ny voalaza ao amin’ny Matio toko faha 10 dia nampianatra ny Roambinifololahy ny Mpamonjy ary niaiky fa tsy hahatontosa ny fiadanana maneran-tany mandritra ny fiainana an-tany ny iraka nampanaovina Azy. Nasaina nanonona fiadanana tamin’ireo tokantrano mendrika notsidihan’izy ireo ny Apôstôly saingy nampitandremana fa ho “ao ampovoan’ny amboadia … [ary] ho halan’ny olona rehetra … noho ny anarako; fa izay maharitra hatramin’ny farany no hovonjena.”6 Misy fanambarana manan-danja iray ao amin’ny andininy 34 manao hoe: “Ary aza ataonareo fa tonga hitondra fiadanana ambonin’ny tany Aho.”7 Mazava fa tsy nisy ny fiadanana manerana ny tany nandritra ny asa fanompoan’i Kristy teto an-tany, ary tsy misy izany amin’izao fotoana izao.
Fitsipika tena manan-danja maro no ampianarina ao amin’ny teny fanoloran’ny Tompo ny Fotopampianarana sy Fanekempihavanana. Mikasika ireo izay tsy mibebaka, ny Fanahin’i Kristy izay nomena ny olona rehetra tonga eto amin’izao tontolo izao8 dia “tsy hiezaka hitaona ny olona mandrakariva.”9 “Ny fiadanana [koa] dia esorina eto an-tany